“Sifisa anciphise ikhabhinethe uMengameli”:PPF – Sivubela intuthuko Newspaper
“Sifisa anciphise ikhabhinethe uMengameli”:PPF
UNobhala wePPF uMnuz. Sithembiso Kubheka kanye nesekela lakhe uMatshidiso Mfikoe
Inhlangano I-Progressive Professionals Forum (PPF) isiveze ukuthi inesifiso sokuthi uMengameli wezwe osazogcotshwa ngokusemthethweni ngesonto elizayo uMnuz. Cyril Ramaphosa uma esekhetha iKhabhinethe Kanye noNdunankulu beziFundazwe aqinisekise ukuthi ukhetha abantu abazoyisa izwe laseNingizimu Africa phambili.
Le nhlangano isho lokhu esthangamini sabezindaba ebesibanjelwe eThekwini namhlanje.UNobhala Jikelele walenhlangano uMnuz. Sithembiso Kubheka uthi balindele ukuthi uRamaphosa ukhetha abantu abanamava aqavile futhi abazokwenza umsebenzi ngendlela efanele.
“Ezinye zezinto esizilindele ukubona uMengameli enciphisa isibalo seKhabhinethe ukuze kuzoncipha izindleko ezinganasdingo nezigcina sezimosha imali yabakhokhibentela eziholela ekutheni nezidingo zomphakathi zingabe zisenzeka kahle.”Kusho uKubheka.
Umnyango ubhonge emswanini ngokukhothama kweNkosi